Shisheeyaha Oo Lagu Weeraray Gobalka Shabeelada Hoose. – Calamada.com
Shisheeyaha Oo Lagu Weeraray Gobalka Shabeelada Hoose.
calamada March 21, 2017 1 min read
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Garas Jiireed ee dhaca duleedka magaalada Qoryooley ayaa xaqiijinaya in dagaalo xoogan halkaas uu kudhexmaray ciidamo katirsan jabhada dagaalka mujaahidiinta wilaayada Sh.hoose iyo cidamado kamid ah kuwa kuffaarta afrikaanta.
Ciidanka mujaahidinta oo la socday dhaq dhaqaaqa cadowga ayaa weerar dhabo gal ah udhigay askarta kuffaarta oo iyagoo lugeynaya saaka barqadii kasoo baxay Qoryooley si ay u carqaladeeyaan amaanka iyo xasiloonida kajirta deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee hoostaga degmooyinka Qoryooley iyo Janaalle.
Markale ayay cadowga isku dayeen in ay duulaankooda horey usoo wadaan hase yeeshee waxay la kulmeen weerar labaad oo dhabo gal ah oo markii dambe isku badalay dagaal toos ah, mudo ayay dagaanaayen halkii uu kuqabsaday weerarka labaad, kaas oo dhabarka ka jabiyay damacii gaalada ee ku aadana in ay dhibaateen shacabka muslimiinta ah.
Sarkaal katirsan ciidanka mujaahidiinta ayaa idaacada islaamiga andalus u xaqiijiyay in uu jiro qasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac ah oo cadowga lagu gaarsiiyay ilaa sedex weerar oo dhabo gal ah.
Ugu dambeyntiina ciidankii nasaarada afrikaanta ee saaka duulaanka soo qaaday ayaa iyago baqo cararaya waxa ay dib ugu laabteen degmada Qoryooley.
Previous: Daawo Sawirro: Jamciyadda Al-Ixsaan Al-Kheyriyah Oo Raashin ka Qeybisay Deegaan Hoos Yimaad Magaalada Baraawe.
Next: Gaari Taw Ah Oo Lagu Gubay Gobalka Shabeelada Dhexe.